Ahoana ny fomba ampiasako ny rindran-kaonty mifandraika amin'ny tombony ho an'ny tombontsoako manokana?
Mazava ho azy fa manohy miteny amintsika ny goavamalaza eran-tany fa ny algorithm lehibe indrindra dia mifantoka amin'ny votoatiny avo lenta izay manome lanja tena marina ho an'ny mpampiasa. Tsy misy fisalasalana, mbola ny mpanjaka ihany ny votoatiny. Na izany aza, ny mombamomba ny rohy organika amin'ny vohikala rehetra dia mbola mitana ny laharana faharoa indrindra ho an'ny Google. Izany no antony tsy ilàna ny filazana hoe ny rindran-tsavily tsara dia anisan'ny fototry ny tetikasa maoderina amin'ny Search Engine Optimization. Midika ve ny fihetsika tsy mety amin'ny pejin'ny backlink dia tsy vitan'ny hoe tsy mahavita mahazo tombombarotra mety, fa mety handratra koa ny fandrosoana misy eo aminao - canada dedicated hosting. Ankoatra izay, raha toa i Google dia ahiahiny ny tranonkalanao na ny bilaoginao amin'ny fanararaotana, dia mety ho tonga hatramin'ny farany mihitsy aza rehefa misaraka ny valin'ny fikarohana rehetra indray mandeha ny zava-drehetra (raha tsy izany, fandrarana maharitra ny fikarohana). Izany no mahatonga ny famakafakana ny fifanintsanana fifanintsanana - miaraka amin'ny fandrosoana sy fampanantenana tena tsara indrindra - dia fanapahan-kevitra tsara tokony ho entina hanamafisana ny tetik'asa fanorenana tsara indrindra azo atao. Ary hasehoko anao ny fomba handinihana ny rindran-kaonty mpifaninana aminao. Ireto ambany ireto dia dingana telo tsotra mba hanaovana fikarohana mety ary hahatonga ny ankamaroan'ny mpivarotra tsena.
Fantaro ireo mpanohitra tsy nipetrahanao
Alohan'ny fikarohana ny rindran-kira fifaninanana, ianao dia mila mamantatra ireo tranonkala mahomby indrindra an'ny mpanohitra akaiky ao amin'ny tsena niche, na ny sehatry ny indostria. Ary ny tanjona dia azo atao mora kokoa, mba hieritreretanao. Raha izaho kosa, dia nanao asa am-pahombiazana aho ary nianatra nandresy sy tsy fahombiazan'ny mpifanandrina mialoha. Raha ny tsara indrindra, ny famantarana ny mpanohitra anao dia tokony hatao ela be talohan'ny tranonkalanao na ny bilaogy dia miaina. Na izany na tsy izany, izao fotoana izao dia efa nahavita ny famakafakana ny fanadihadiana iray manontolo momba ny fifaninanana ianao mba hampiasa ny backlinks mpifaninana tsara indrindra ho tombontsoanao manokana. Tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana azy? Manoro hevitra aho hampiasa an'i Serpstat, fitaovana maimaim-poana an-tserasera izay nanampy ahy tamin'ny fahatakarako ny mpanohitra ny lohako. Ny fampidirana azy amin'ny teny anglisy dia azonao ampiasaina ity fitaovana ity mba hahitana ireo tranonkala mpifaninana tsara kokoa anao. Raha mandinika ny isan'ireo teny fanalahidy ianao, ny haben'ny habeny amin'ilay tranonkala, ary ny zava-misy dia tsara ny hahafantaranao ny toerana hanombohana azy.
Fantaro ny tena tanjonao
Ny ankamaroan'ny, ny pa (ny pejy ho an'ny pejy), ny DA (fahefana tompony), ary ny PR (laharana). Raha ny fahitanao azy, ny tanjonao dia ny manana ny mari-pahaizana ambony indrindra hitifitra amin'ireo metatra telo ireo. Amin'izany fomba izany, tokony ho fantatrao koa ireto angona manaraka ireto - ny isa ny mpanohana anao amin'ny rindranasa (amin'ny pejy miresaka sy ny sehatra), ary ny sary lehibe momba ireo lahatsoratra fanonganam-pitaovana tsara ho an'ny SEO (ny isa, ny fizarana, ary ny fahasamihafana amin'ny teny fanalahidy, ny marika , ary ireo toetra manan-danja hafa).
Analyse Backlinks Competitor
Mazava ho azy fa tsy misy formulaire universelle ho an'ny fahombiazana. Na dia izany aza, ny fampiasana fitaovana fitadiavana hahazoana ny fahatakarana lalina momba ny backlinks mpifaninana aminao dia mety ny fomba tsara indrindra hijanonana amin'ny fifaninanana amin'ny tsena. Noho izany, mila famakafakana fifaninanana ho an'ny tranonkala tsirairay ianao miaraka amin'ny mombamomba ny mombamomba ny mombamomba anao izay hita eo an-tampon'ilay fikarohana. Amin'izany fomba izany, manoro hevitra aho hamaha ny iray amin'ireo fitaovana fanodinana backlink manaraka: Open Site Explorer (Moz), Semalt Analyzer, miondrika, na Ahrefs - no nanandrana azy rehetra. Na dia izany aza, ny singa fototra amin'ny asany dia azo oharina tanteraka, na dia eo aza ny endriny maromaro mifanaraka amin'ny endriny sy ny filaminana roa avoakan'ny Analyzer (Semalt) sy Open Site Explorer (Moz). Noho izany, tsy misy afa-tsy ny manapa-kevitra hoe iza no tianao alohan'ny voalohany. Raha vao azonao ny fomba fijery marina, ny ilainao rehetra dia ny mamerina ireo backlinks matanjaka mahery indrindra amin'ny mpanohitra anao, na farafaharatsiny mahazo fahatakarana tanteraka momba ny fananganana rohy amin'ny rindrina ao amin'ny efitranonao.